Galmudug oo sheegtay inay jiraan dad diidan nabadda deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Galmudug oo sheegtay inay jiraan dad diidan nabadda deegaanka Dhabad ee gobolka...
Galmudug oo sheegtay inay jiraan dad diidan nabadda deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud
Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay in la soo afjarayo xiisad ka taagan deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduud
Madaxweynaha ayaa Dhabad kula hadaly dadweyne isugu soo baxay soodhaweyntiisa.Kaas oo galankii dambe ee shalay gaaray dhabad.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay jiraan dad hurinayo codaalada deegaankaas,isagoona hadal kiisa ku daray in laga warqabo dad uu sheegay in ay dhibeyso xasiloonida dhabad.
Waxaa uuna ugu baaqay in ay ka waan toobaan arimahaas.
Axmed Cabdi Kaariye oo ah madaxweynaha galmudug ayaa waxaa uu sheegay in ay kulamo la qaadan doonaan waxgardka deegaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan inta ay ku sugan yihiin deegaanka waxaa uuna hadalkiisa uu ku soo xiray in aysan jiri dooneen deegaan kamid ah galmudug oo ay ka jiri doonin xiisad u dhaxeyso dad wallaalo ah.
Previous articleWasiir Sadiiq Warfaa oo sheegay inuu covid 19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka
Next articleMaxaa maanta looga hadli doonaa kulanka golaha shacabka